Ihembe labesilisa, ihembe labesilisa, isikibha sabesifazane, isikibha sikakotini - umbono
Sine cishe iminyaka eyi-10 yokuhlangenwe nakho ukusiza amakhasimende ethu ngezidingo zawo zomkhiqizo wesambatho.
Ikhwalithi yisiko lethu, futhi yinto ebaluleke kakhulu kithi. Sihlala siphikelela esimisweni esithi "Ikhasimende Kuqala, Ikhwalithi Ebaluleke Kakhulu".
Sineqembu lokwakha lochwepheshe, elingakusiza udwebe isithombe somphumela ngokwengqondo yakho.
Custom ehhovisi iyunifomu inkinobho ukotini cust ...
wholesale ezishibhile yokukhangisa ngokwezifiso egijima 100 ...
ngokwezifiso zabesifazane tri-hlanganisa 50% polyester 25% ...
ngokwezifiso screen ukuphrinta ethafeni akukho brand amadoda ezithambile bas ...
I-Nanchang Vision Garment Co, Ltd. itholakala edolobheni laseNanchang, esifundazweni saseJiangxi, eChina. Sinefektri yethu yezembatho kanye nefektri yokuphrinta, cishe iminyaka eyi-10 yokuhlangenwe nakho ukusiza amakhasimende ethu ngezidingo zawo zomkhiqizo wesembatho, ngokunikela ngemifekethiso yangokwezifiso, ilogo yangokwezifiso yokuphrinta, ukuphrinta kokudlulisa ukushisa, ukuthambisa okungaphansi kanye nokuphrinta kwesikrini. Ikhwalithi yisiko lethu, futhi yinto ebaluleke kakhulu kithi. Sihlala siphikelela esimisweni esithi "Ikhasimende Kuqala, Ikhwalithi Ephambili".
ngokwezifiso esiwuhogelayo 100% polyester umswakama wickin ...